Redmi Rịba ama 8 Pro ga-enwe mmiri jụrụ | Gam akporosis
Ihe ngosi Redmi 8 Pro ga-abata na mmiri jụrụ
Fewbọchị ole na ole gara aga ka akwadoro ya ụbọchị ịgba akwụkwọ nke Note 8 na Redmi Rịba ama 8 Pro. Thesebọchị ndị a nkọwa nwekwara a leaked banyere ekwentị abụọ a dị n’etiti dị na China, bụ nke doro anya na ndị na-ege ntị gamer. Anyị enwewo ike ịhụ ya na nhọrọ nke ndị nhazi ya, data ọhụrụ gosipụtara ya.
Ma ọ dịkarịa ala na nke Redmi Rịba ama 8 Pro, o yiri ka o doro anya na e zubere ya maka ndị na-ege ntị egwuregwu. Dị ka a ekwentị ga-abata na mmiri mmiri jụrụ, nke bụ ihe dị oké mkpa na ekwentị ndị ezubere maka egwuregwu, ọ ga-abụkwa otu n'ime atụmatụ dị mkpa na ekwentị a.
Xiaomi choro itughari na ihe kariri ike na ime ihe na etiti a. Fewbọchị ole na ole gara aga E gosipụtara MediaTek Helio G90T ịbụ onye nhazi ahụ ahọrọ maka Redmi Rịba ama 8 Pro. Ugbu a, ekwenyela na ngwaọrụ ahụ ga-abata na mmiri jụrụ oyi, maka arụmọrụ ka mma.
Na foto ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ kesara na ekwentị ị pụrụ ịhụ na hotara na mbụ efere jụrụ. Yabụ ịdị adị nke ya gosipụtara n'ụzọ dị otu a, na-enweghị ekwuru ya n'ụzọ doro anya site n'aka ndị nrụpụta China. Ozi ọma maka ekwentị.
Ebe ọ bụ na ọ na-apụta ìhè na Redmi Note 8 Pro a ga-enye anyị ezigbo arụmọrụ n'oge niile. Na mgbakwunye na ikwe ka anyị nwee ike igwu egwu ogologo oge na ekwentị, dị mma na egwuregwu ndị ahụ nwere egwuregwu ogologo. N'akụkụ aka nke ọzọ, processor emeela ihe karịrị Snapdragon 710 na ule, na-ahapụ ezigbo mmetụta.
Na Ọgọstụ 29, anyị ga-ahụ ekwentị abụọ ndị a na ọkwa. A na-atụ anya na na Septemba a ga-amalite ọkwa Nkọwa 8 Pro na ahịa a. Agbanyeghị na nkọwa ndị a anyị ga - amata n'ọchịchị na - esote izu na ngosipụta ya na China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ihe ngosi Redmi 8 Pro ga-abata na mmiri jụrụ
Wepụtara nkọwa ndị mbụ nke OnePlus Smart TV